#BIM - Mazava ho azy fa famolavolana drafitra mampiasa rafitra AutoDesk Robot - Geofumadas
Aprily, 2019 AulaGEO fampianarana
Torolàlana feno momba ny fampiasana ny Robot Structural Analysis ho an'ny famolavolana, kajy sy ny famolavolana ny fika mivaingana sy ny vy
Ity fampianarana ity dia handrakotra ny fampiasana ny programa matihanina Robot Structural Analysis for modelling, kajy sy ny famolavolana singa manorina ao amin'ny fananganana mivaingana fananganana sy trano indostrialy.
Tamin'ny dingana iray natao ho an'ny arisialy, injeniera sivily ary teknisiana amin'ny faritra maniry ny hanadino ny fampiasana Robot hanitsiana ny firafitry ny sivily araka ny fitsipika ekena indrindra eran-tany sy amin'ny fiteny izay safidiny.
Hodinihintsika ny fitaovana famoronana ny firafitra (vatan-kazo, tsanganana, takelaka, rindrina, anelanelan'ny hafa). Ho hitantsika ny fomba hanatanterahana ny kajy ny tranga mavesatra amin'ny habakabaka sy ny seismika, ary koa ny fampiasana fenitra azo ampiharina amin'ny entana mavesatra sy ny sary masina. Hodinihintsika amin'ny ankapobeny ny fitrandrahana asa ho an'ny famolavolana singa mivaingana fanamafisana, ny fanamafisana ny fiadiana takiana amin'ny alàlan'ny fanaovana kajy amin'ny tsanganana, ny vakana ary ny marama. Torak'izay koa, hojerentsika tsara ny fitaovana mahery vaika RSA amin'ny antsipirihany ireo singa mandrafitra manda fanamafisana tsirairay na mitambatra. Hodinihintsika ny fomba hampidirana ireo metisy normative ao amin'ny drafitra amin'ny antsipiriany sy ny fametrahana ny vy fanamafisana ny andry, ny vakana, ny hena, ny rindrina ary ny fanorenana mivantana mitokana, mitambatra na mihazakazaka.
Amin'ity taranja ity dia hianaranao ny fampiasana ny fitaovana RSA ho an'ny famolavolana fifandraisana vy, mamorona fomba fijery scematic, famoahana fanamarihana ary ny valiny mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena.
Ity kasaina ity dia mikasa ny ho vita ao anatin'ny iray herinandro, ka manokan-tena mandritra ny adiny roa isan'andro amin'ny fanatanterahana ny fanazaran-tena izay hiaranganay miaraka mandritra ny fampianarana, saingy afaka mandeha amin'ny hafainganam-pandeha ianao mahatsiaro ho mahazo aina.
Mandritra ny fampianarana dia hamolavola ohatra roa azo ampiharina isika izay hanampy antsika amin'ny tranga tsirairay mba hahitana ny môdely sy ny famolavolana fitaovana vita amin'ny mivaingana sy vy.
Raha misoratra anarana amin'ity taranja ity ianao, manome toky izahay fa ho tsara sy mahomby kokoa ianao rehefa manatanteraka tetikasa strukture, ary koa ny fidirana amin'ny fampiasana fitaovana famolavolana misy endri-javatra maro, satria matihanina sy mahomby.
Inona no hianaranao?
Modely sy endrika endrika fanamafisana sy tranobe vy vita amin'ny RSA
Mamorona ny maodely geometrika ao amin'ny fandaharana
Mamorona ny modely an-tsoratra ny firafitry
Mamorona fanamafisana vy
Kajy sy famolavolana metaly vy araka ny fitsipika
Hetsika ilaina amin'ny làlana
Tokony efa nifankahalala tamin'ny lafiny teoretika momba ny kajy ireo rafitra ianao
Torohevitra ny hampidirina na tsy hahapetraka ny andiam-pitsarana ny programa
Iza no aleha?
Ity taranja RSA ity dia kendrena amin'ny arisialy, injeniera sivily ary izay mifandraika amin'ny kajy sy ny famolavolana rafitr'asa
Azo jerena amin'ny teny Espaniôla ihany koa ny fampianarana
Fianarana BIM Revit courses
Previous Post«Previous #BIM - Drafitry ny tetik'asa struktural (Rafitra fanavaozana + vy)
Next Post Ny tsara indrindra amin'ny vaovao momba ny QGIS 3.Xmanaraka »